Inta badan, oo ah 10-Album Liiska dhan Time aad ka filan karto in la helo ugu yaraan hal, albums labo Beatles waxaa meel. Tani ma aha sabab macquul ah la'aanteed - saameynta ay Beatles ay lahaayeen on ab ka mid ah fanaaniinta ayaa bey u maleynayaa in aan noqdo heesaa oo dhan qeybtii ugu danbeysay ee qarnigii ah in aan la saamayn ku band Liverpudlian hab qaar ka mid ah. Albums ay dhab ahaantii da'doodu aad u yar oo weli ka dhawaajiyaan weyn maanta haddii ay tahay mid ka mid ah hits hore sida marooji ay & qayliya ama ay wax soo saarka ee la soo dhaafay taas oo ahayd 'Hel Back' ay LP final, inkastoo ay music ka weyn yahay nus ka mid ah dhammaan dadka ku nool maanta - 52% oo ka mid ah dadweynaha Caalamka da'doodu ka yar tahay 30 iyo ma ahaayeen nool marka Beatles ay ahaayeen qoraal iyo fulinta qaar ka mid ah hits ugu weyn adduunka ayaa arkay. Haddii qof da'doodu kala tahay 9 bilood, 9 sano ama 90 sano jir ah waxa uu noqon lahaa si weyn adag tahay in la iska caabin ah la aqoonsado dhawaaqa Beatles ee hab qaar ka mid ah, ka foot siyoodba iyo sacba in cayaar wareega qolka fadhiga ama wax loo qabto ayaa qalloociya! Halkan waxaa ku Beatles 13 Qaasaali:
No album sameeyey, ama wali, ay gaareen wixii Beatles wuxuu ku samayn jiray ay 1966 album 'Revolver'. The kuwan raadkaygay album gudihiisa sida 'Yellow Submarine oo Berri Marna Yaqaan' ahaayeen ee Kacaanka oo waxay u jeediyeen goobta music ka saaraa madaxa iyadoo la isticmaalayo cusub oo overdubs, cajalado u socdeen iyo siddo. 'Revolver' qaatay 34 toddobaad ee Qaasaali UK Chart iyo joogay tirada 1 ee dalalka muddo lix todobaad ah. Waxaa sidoo kale lagu qiimeeyaa sida lambarka mid ka mid ah All Time Top 1000 Warsame Qaasaali.
2: 1965 - 'Rabadhka Soul'
Lyrically, heestii 'Rabadhka Soul' ahaa horumarka weyn Beatles The. Waxay album 9aad in lagu sii daayo si cad u guutadii ahaayeen wax ka badan koox pop ah. 'Rabadhka Soul' la qoray, diiwaan gelin iyo iya kaliya afar todobaad gudahood weli waxaa tusaale u ah guusha guutadii gaari lahaa dhigay. Oo ay ku jiraan nostalgic 'In My Life' iyo 'Bird Tani ayaa u duulay' sii daayo si qoto dheer confessionalism ee album this ballaadhiyaa guutadii Taageerayaasha by tiro aan xad lahayn.
3: 1968 - 'Beatles The'
Sida caadiga ah loo yaqaan White Album sababtoo ah waxa lahayn sawiro nooc kasta jaldiga, halkii qoraalka fudud ee magaca guutooyinkii. Abuuridda album ayaa ku lug muran badan u dhexeeya xubnaha iyo xitaa keentay in Ringo Starr ku meel gaar ah ka tago iyo ka tago Paul McCartney inuu u ciyaaro fuusto laba kuwan raadkaygay. Album ayaa lagu iibiyey in ka badan 9.5 koobi caalamka oo weli la kulmeen dhalleecayn ugu khatarta weli la kuwan raadkaygay badan loo yaqaan 'muhiim ahayn' iyo 'mana ah' id dhaleecayn music waqtiga.
4: 1967 - 'Sgt Pepper ee kelida ah Hearts Club Band'
Album Tani waa run ahaantii muhiim ah in habab badan oo waa shaki ku istaahilo in booska ugu sareysa. Waxaa helay guul degdeg ah oo qaatay 22 toddobaad ee booska koowaad ee gooldhalinta UK iyo 15 toddobaad ee ugu tirada Mareykanka 1 iyo noqdo guusha ee 4 Grammy Awards. Album waxa uu ahaa ee Kacaanka oo qaabeeya ee music wakhtiyada iyo sidoo kale wax kasta in la raaco, la raad waxaa ka mid ah lagu helay in wax walba oo ka soo saarka heesaa Kane West ayaa si rockers indie Wadajirka ee Animal farshaxanka-pop.
5: 1970 - 'ha loo'
'Ha noqoto' waa heestii studio 12aad iyo final by Beatles ayaa, waxaa la sii daayay 8aad ee May 1970 ka calaamadda Apple Record, wax yar ka dib markii lagu dhawaaqay kooxaha ka kala tagno. Warar xan ah oo isku dhacyo joogta ah oo u dhexeeya xubnaha urur intii lagu duubo ee album taasi keentay in caymiska warbaahinta iyo filim ee 2004. album laftiisu gaaray tirada 1 labada ee UK iyo Mareykanka inkastoo wajahay kala duwan laga jiro waqtigan.
6: 1967 - 'maqan Tour sixir'
Guriga ka mid ah heesaha ugu horeysay in la diiwaan geliyo inta lagu guda jiro kalfadhiga caanka ah 'Sgt basbaaska' kaas oo soo saaray laba ka mid ah silsiladihiina hits weyn ee waqtiga oo dhan: Penny Lane 'iyo' Strawberry Fields '. More si buuxda kuwan raadkaygay lagama maarmaan in ay ka yimaadaan 'maqan sixir Tour' ah album waa wadada 'I am maroodi badeed The' iyo 'aad u baahan tahay waa Love'. Album waxa uu ahaa mid Grammy album la soo magacaabay in Maraykanka iyo arkay guul ballaaran, labada dhinac ee biyaha.
7: 1964 - 'A Hard Maalinta Night'
Album Tani waa meesha ay burcad scouse afar ahaa ayaa bilaabay inay ka dhawaajiso ayaa run ahaantii la mid ah halyeeyada waxayna la mid noqdeen. 'A Hard maalmood ah habeen ahaa ay album saddexaad oo ugu horeeyay ee ka kooban yahay 100% wax cusub oo aan daboolida kasta. Album ayaa sidoo kale ahaa soundtrack ee ugu horeysay ee filimka. Waxaa kaalinta gooldhalinta album US iyo UK ee July 1964 iyo lix iyo soddon sanno ka dib markii ay soo saartay waxaa lagu abaalmariyey meel 5aad ee liiska Q ee '100 Qaasaali British Ugu Weynaa Ee Abid.
Abbey Road ahaa album u danbeysa ee Beatles ayaa duubay, si kastaba ha ahaatee waxa aan ahaa ee la soo dhaafay in la sii daayo - inkasta oo ay ahayd markii ugu dambeysay dhamaan xubnaha urur wada qaybqaatay studio ah, samaynta sidan xoogaa ah iskaashi dheeraad ah oo gaar ah. Cover album ayaa, taas oo muujinaysa xubnaha socda guud ahaan isgoyska zebra ku saabsan wadada ka baxsan istuudiyaha caan ah, hadda waa mid ka mid ah sawirada ugu Keeban iyo caanka ah ee ahaanteed ee taariikhda muusigga.
9: 1963 - ku baryayaaye maanta i sii daa '
The Beatles album ugu horeeyay ee ku baryayaaye maanta i sii daa 'ka kooban yahay asalka iyo kidhliyadiisii ​​wax badan - laga bilaabo' weecin qaylo 'ee Xisbiyada in uu faham ka dhadhami A ee Honey'. Asalka ah waa fudud la yaab leh sida "Waxaan arkay iyada Waxaa Joogtada 'oo dhan ay qoreen John Lennon iyo Paul McCartney. Inkastoo album tani waa in ka badan 50 sano jir ah, oo heeso badan ayaa weli ugu cadcad maanta dad badan oo jira hits classic ee dhammaan habeen karaoke dunida oo dhan.
Platinum Double in Labada Maraykanka iyo Kanada, Gold certified ee Australia iyo Platinum UK heestii 'Help!' mid ka mid ah guutooyinkiisa oo ugu guulaha badan ahaa, iibinta ka badan 2.500.000 koobi dunida oo dhan. Album ayaa ka dhigan tub koox oo ka dibna u dhaqaaqay isa sii casriyeeya qoraal song iyo diyaarinta ah. John Lennon ka hadlay album sida qaylo caawimaad iyo ka xun jidaynayey track horyaalka 'Help!' si ay u beddelmi song ah Salel.
> Resource > Top List > Top 10 Beatles Warsame Qaasaali